I-Ofisi yase-China okanye ibhokisi yokugcina iphepha elinomthamo omkhulu inokugoqwa uMenzi kunye noMthengisi | Huaguang
Ibhokisi yokugcina iOfisi okanye iphepha elinomthamo omkhulu inokugoqwa
Ubukhulu: 36cm * 28.5cm * 17cm
Ibhokisi ephethe into, eyile nto iya kuba yinto (uninzi lukhomba kwinqaku elincinci, lunjenge: zokubhala kweofisi, izithambiso, idatha yefayile, isixhobo esincinci, iikawusi, ibhulukhwe yangaphantsi njlnjl.) Qokelela ndawonye, ​​njengoko igama lithetha ukugcina ibhokisi.
Iibhokisi zokugcina, ezikwabizwa ngokuba ziibhokisi zakudala, zazisetyenziswa ngamaqela ezinto zakudala kwiintsuku zokuqala ukugcina izinto ezivunyiweyo kunye nezicwangcisiweyo zezinto zenkcubeko. Ezi bhokisi zihlala zinenombolo engqongqo, ezinye zinkulu kwaye zincinci, kodwa uninzi zinobungakanani bebhokisi yezihlangu (izinto zakudala ezivunyiweyo zihlala zinobunzima, kwaye ubukhulu bebhokisi yezihlangu yeyona ifanelekileyo ekuphatheni). Kuluntu lwanamhlanje, iibhokisi zokugcina ziguquke ngokuthe ngcembe zaba "ziibhokisi ezahlukeneyo", ezisetyenziselwa ukubamba izinto. Iibhokisi zokugcina kwimarike zixhaphake kakhulu, ixabiso eliphantsi, inzuzo ngokubanzi, ilungele uluntu ukuba lusebenzise, ​​ke zininzi iimveliso zebhokisi yokugcina emarikeni.
Intsingiselo yokuba ukugcinwa kukudlula kwendawo efanelekileyo yokusebenzisa oko kukuthi, ukufezekisa injongo yokusebenzisa indawo efanelekileyo kunye nebhokisi yethu yokugcina, nangona ubukhulu bayo bunokugoqwa, okonga iindleko zokuhambisa, oku kunciphise kakhulu iindleko zokuthenga. . Izinto zephepha zinokuphinda zisetyenziswe emva kokusetyenziswa, ezihlangabezana neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo Kwaye isebenzisa izikrufu, ke kulula kakhulu kwaye kuyakhawuleza ukudibana, awunakukhathazeka malunga nokuyithenga kwaye ungabinakho ukuyidibanisa. Ngokubanzi iseti yokudityaniswa kwe-2, iphinde yafakwa kwifilimu yokuncipha, ixabiso lifikeleleka kakhulu. Le bhokisi yokugcina umbala oqinileyo, efanelekileyo yokugcina amaxwebhu eofisini, kodwa ikwalungele nokugcinwa kwezihlangu kunye neempahla, ungathenga iseti enye, enye yeofisi yakho enye ibe yeyakho. Gcina iofisi yakho kunye nekhaya licocekile kwaye lihle. Awusoyiki izinto ezibekwe ecaleni ezingafumaneki.
Umda wephakheji yensimbi
Isiphelo sepakethi yentsimbi, sizinze kwaye sihlala ixesha elide.Beka eofisini kubonakala ngathi kuhlala umoya.Ayizukutsala iofisi.
Ubungakanani be-36cm * 28.5cm * 17cm bunomthamo omkhulu kwaye bunokubamba izinto ezininzi.
Qaphela izinto ephepheni ukulungiselela ukuhlelwa ngokulula kunye nokukhangelwa.
Egqithileyo I-logo eyenziweyo eyenziwe ngesandla yeLifa leMpahla yokuLungisa iBhokisi yokuhombisa ngeMirror Ityesi yomsesane webhokisi yobucwebe
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu wokuqokelelwa kwedesika yokuprinta okwenziwe ngemagazini
Ibhokisi yeZipho zokuzalwa
Ibhokisi enkulu yeZipho